Maraykanka oo sheegay in dalka Iiraan uu yahay Saldhiga Cusub ee Kooxda Alqaacida ! | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Maraykanka oo sheegay in dalka Iiraan uu yahay Saldhiga Cusub ee Kooxda Alqaacida !
Jan 13, 2021 - Aragtiyood
Nairobi ( Kalshaale ) Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa dowladda Iiraan ku eedeeyay in kooxda jihaad doonka ah ee al-Qaacida ay u oggolaatay in “saldhig cusub” ay ka sameysato halkaas.
Shir jaraa’id oo uu shalay ku qabtay magaalada Washington, ayuu Mr Pompeo ku sheegay in markii ugu horreysay uu xaqiijinayo in Masri uu geeriyooday 7-dii August, inkastoo uusan faahfaahin dheeraad ah bixin.
“Joogitaankii Masri ee gudaha Iiraan waxay tilmaameysaa sababta aan halkan u joogno. Al-Qaacda waxay leedahay saldhig cusub: waa Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan.”
“Taas waxaa ka dhashay, in hindisihii khaldanaa ee [Osama] Bin Laden uu hananayo awood.”